Fifanakalozan-kevitra avo lenta amin'ny fiantraikany sy ny hetsika nataon'ny fanjakana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fifanakalozan-kevitra avo lenta amin'ny fiantraikany sy ny hetsika nataon'ny fanjakana
Nanao ny raharaham-pitsarana i Jamaika androany amin'ny adihevitra avo lenta miaraka amin'i Karaiba sy Etazonia any Etazonia mba handrindra, hianatra ary handray andraikitra amin'ny fiantraikan'ny Coronavirus sy ny fizahantany.
Ity dia sora-tanana misy ny adiresin'i Hon. Minisitry ny fizahantany Ed Bartlett avy any Jamaika mankany amin'ity fihaonambe virtoaly avo lenta androany ity.
Misaotra Tompom-bady / Ramatoa Ramatoa ary indrindra ho an'ny Misiona maharitra any Costa Rica noho ny fanamorana izany fotoana izany hizara ny traikefa manokana an'i Jamaika amin'ny fiatrehana ny areti-mandringana ankehitriny sy ny famolavolana vahaolana mahomby ho an'ny fanarenana.
Araka ny efa niainantsika, ity viriosy ity dia nampiditra ny toekaren'izao tontolo izao tao anaty tsy fahazoana antoka, niaraka tamin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ho iray amin'ireo sehatr'asa voakasik'izany indrindra. Ity dia maneho ny fampisehoana ratsy indrindra ho an'ny fizahan-tany iraisam-pirenena hatramin'ny 1950 ary mamarana tampoka ny vanim-potoana fitomboana maharitra 10 taona hatramin'ny krizy ara-bola tamin'ny 2009.
Efa tamin'ny telovolana voalohany, ny fidiran'ny mpizahatany iraisam-pirenena (ITA) dia nihena 44% raha oharina tamin'ny 2019. Tamin'ny volana aprily, niaraka tamin'ny fameperana mafy ny fivezivezena sy ny fanidiana ny sisintany, ny ITA dia nidina ho 97%. Ity dia maneho fatiantoka tonga 180 tapitrisa iraisam-pirenena raha oharina amin'ny taona 2019 miaraka amin'ny vola mitentina 198 tapitrisa dolara amerikana very amin'ny tapakila fizahan-tany iraisam-pirenena (vola azo amin'ny fanondranana).
Ny fanjakana mandroso amin'ny nosy kely (SID) dia miatrika fanamby manokana amin'ny fampandrosoana maharitra azy ireo, ao anatin'izany ny isan'ny mponina vitsy an'isa, ny loharanom-bola voafetra, ny marefo amin'ny loza voajanahary sy ny fikoropahana ivelany, ary ny fiankinan-doha amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny fiankinan-doha mavesatra sy lalina kokoa amin'ny fizahan-tany ho mpandray anjara amin'ny laharam-pahamehana amin'ny Vokatra An-trano Gross an'ny firenentsika, izay mahatratra 50% ny harin-karena faobe amin'ny sasany, dia mety hampitombo ny fahalemen'ny faritra amin'ity krizy ity ankehitriny. Izy io dia na dia fantatsika aza ny fahafaha-manao be dia be amin'ny dia sy fizahantany hanitsy ny toe-karenantsika amin'ny làlana mankany amin'ny fanarenana sy fampandrosoana.
Misy SIDI enina ambin'ny folo any Karaiba izay iray i Jamaika. Tamin'ny taona 2019, Small Island Developing States (SIDS) dia nanoratra 44 tapitrisa tamin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena, ary manodidina ny 55 tapitrisa dolara amerikana ny vola azo tamin'ny fanondranana. Nandritra ny efa-bolana voalohany tamin'ny taona 2020, ny SID dia nanoratra fihenan'ny 47% ny fahatongavan'ireo tonga teo amin'ny 7.5 tapitrisa.
Raha ny momba an'i Jamaika, ny trosa ivelany dia 94% amin'ny harin-karena faobe hatramin'ny martsa 2019 ary ho an'ny martsa 2020, tombanana ho ambany kely hatrany amin'ny 91%. Ny tombatombana hampihenana ny harinkarena faobe avy amin'ny COVID-19 ho an'ny taom-piasana 2020/2021 dia 5.1%.
Ny vinavinantsika dia nanombana fatiantoka J $ 146 miliara isan-taona ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ho an'ny taom-piasana aprily 2020-martsa 2021 ary poti-bola mitentina J38.4Billion ho an'ny governemanta amin'ny vola miditra mivantana avy amin'io sehatra io.
Na dia mifantoka amin'ny fahalavoana ara-toekarena aza isika dia mahatadidy ireo mpiasa maherin'ny 350,000 ao amin'ny indostria izay efa voasakan'ny COVID mafy ny fivelomany. Midina amin'ny fianakavian'izy ireo sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny fomba tena izy io, mampitombo ny aretina ara-tsosialy misy.
Mazava fa tsy raharaham-barotra toy ny mahazatra izany ary, noho izany, ny valin'ny politikantsika dia mitaky fisainana manavao mba hampifanaraka ny dinamika atahoran'ity fandrahonana maharitra ity amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny famerenana amin'ny laoniny mahomby sy ny "ara-dalàna vaovao" dia hampiavaka ny fahaiza-mivezivezy bebe kokoa sy ny fahafaha-miaina bebe kokoa amin'ny fivelaran'ny orinasa, indrindra ny orinasam-pizahantany bitika, kely ary salantsalany; fampitomboana ny fampiharana ny haitao ho an'ny fanovana nomerika; fomba fiasa sy refy vaovao amin'ny famokarana; ary koa ny fanamafisana mivoatra hanoherana ny fanakorontanana ivelany.
Miaraka amin'ity filozofia ity ao an-tsaina, ny ezaka manokana ho an'ny fanarenana mahomby dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa, indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ny fakan-kevitra dia mbola mitohy ho singa iray manandanja amin'ity vanim-potoana ity. Ny fandraisana anjara manankarena sy isan-karazany avy amin'ireo mpandray anjara rehetra mifandraika amin'ny endrika Komitin'ny Fanarenana fizahan-tany (TRC) napetraka tamin'ny fiandohan'ny krizy ho an'i Jamaika (10 martsa - raharaha COVID voalohany) dia nanatsara ny lisitra sy ny kalitaon'ny fandraisana andraikitra amin'ny famerenana ny ny sehatra.
Ny governemantantsika dia mijoro amin'izao fotoana tena manandanja indrindra izao "Ajanony, jereo, henoy ary hivezivezy", ie, manombatombana ny toe-javatra; politika sy valiny stratejika momba ny asa tanana; manara-maso ny fampiharana mahomby an'ireo politika ireo; ary manomana ny tenantsika hanitsy bebe kokoa sy hitantana am-pamoronana ireo fivoarana tena ilaina eo amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny toekarena manerantany.
Ny fanombanana ny toe-javatra dia nanasongadina izany protokol mazava sy mahomby dia nilaina mba hifehezana ny viriosy, hiarovana ny olona ary hiomanana amin'ny fanokafana tsy azo ihodivirana. Ho an'ity tanjona ity, ny TRC dia namolavola kaonty marina tsara ho an'ny sokajy zana-tsokajy midadasika kokoa izay naparitaka ho fanohanana ireo protokol sy torolàlana ankapobeny avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana.
Ny virus dia mifindra amin'ny ny olona, mila miaro ny olona (teratany sy mpitsidika) isika mandritra io fotoana io, ary ny olona no hitondra ny fahombiazan'ny hetsika rehetra. Ny minisiteran'ny fizahantany dia mametraka laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny renivola amin'ny alàlan'ny ivon-toerana ao Jamaika ho an'ny fanavaozana fizahan-tany (JCTI). Ny JCTI dia niasa mba hampivoatra ny tontolon'ny fizahan-tany mandritra io vanim-potoana io ary, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Company Product Development Company, dia nanofana mpiasan'ny fizahan-tany amin'ny fampiharana sy fizotra sahaza ny protokolon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny COVID19.
Rafitra sy dingana dia tsy maintsy noforonina tsara sy tantanana mba hiantohana fa hiara-miasa amin'ny fomba mahomby ireo protocole sy ireo mpiantsehatra mifandraika amin'ny fikarakarana tsara ity areti-mandringana ity, indrindra amin'ny fanokafana indray ny sehatry ny fizahantany.
Na dia nampiroborobo sy notohanan'ny Jamaikana aza ny fizahan-tany any an-toerana, miaraka amin'ny fizahan-tany 50% amin'ny vola vahiny ho an'ny toekarena, voatery nanokatra ny sisintaninay fotsiny izahay ary miarahaba ireo mpizahatany tonga eny amorontsika.
Ity fisokafana am-pitandremana ity izay nitranga tamin'ny 15 Jona dia natsangana tamin'ny dingana rehetra, ary niorina tamin'ny fizotran'ny fanomanana rehetra ary miaraka amin'ny fiarovana ny olom-pirenentsika, indrindra ireo mpiasan'ny fizahantany, ho fitsipika laharam-pahamehana. Ny fanokafana ihany koa dia nantsoina hoe “lalantsara maharesy” miarahaba ireo mpitsidika mankafy ireo toerana fizahan-tany mpizahatany manana fanamarinana mifanaraka amin'ny COVID manamorona làlana voatondro nefa mamela ny fandinihana, ny fanaraha-maso ary ny fikajiana tsindraindray - ity farany raha ilaina.
Hatramin'ity fanokafana miandalana ity dia nandray mpitsidika 13 000 mahery i Jamaika ary nahazo vola 19.2 tapitrisa dolara amerikana. Tena lavitra lavitra ny tanjontsika stratejika izany, na izany aza, COVID dia nanasongadina ny filàna pivot na loza. Izahay dia manao paikady stratejika mba hahazoana antoka fa afaka mivoaka amin'ity krizy ity isika - maratra fa tsy tapaka.
Ny sehatry ny Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) dia mijanona ho mpandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialin'i Jamaika sy Karaiba midadasika. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2016 nataon'ny Banky fampandrosoana any Karaiba (CDB) mitondra ny lohateny hoe "Fampandrosoana orinasa madinidinika any Karaiba: manoloana sisintany vaovao", ny MSME dia eo anelanelan'ny 70% sy 85% ny isan'ny orinasa, mandray anjara 60% sy 70% ny harin-karena faobe ary manodidina ny 50% ny asa any Karaiba.
Araka ny World Trade Organization (WTO) World Trade Report 2019 - "The Future of Services Trade", amin'ny fampiroboroboana toekarena, ny fizahan-tany sy ny indostria mifandraika amin'ny fizahan-tany dia mirakitra ny fandraisana anjara betsaka indrindra amin'ny fanondranana ataon'ny orinasa bitika, kely sy salantsalany (MSMEs) ) ary amin'ny vehivavy.
Ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika dia tohanan'ny tambajotran'orinasa madinika sy salantsalany misahana ny fizahan-tany (SMTE) izay ny fianjerany avy amin'ny COVID-19 dia eo ho eo amin'ny $ 2.5 tapitrisa avy. Satria ny fizahan-tany no fototry ny toekarena Jamaikana, dia toy izany koa ny SMTE amin'ny vokatra fizahan-tany sy ny traikefa fizahan-tany Jamaikana.
Tsy maintsy tafavoaka amin'ny krizy ity ny SMTE, fa kosa manararaotra ny fotoana natolotry ny fironana vao misondrotra mba hisitsiana sy fitomboana mba hahazoana antoka fa ny toekarena kely sy marefo, toa an'i Jamaika, dia afaka miroborobo aorian'ity areti-mandringana ity.
Ho an'ity tanjona ity, SMTEs dia homena fonosana faharetana ao anatin'izany ny kitapo miaro, fitaovana fanadiovana tsy misy fikitika ary thermometre ary koa fitaovam-piarovana manokana sy fiofanana mifandraika amin'izany.
Hisy ny fanamorana manokana amin'ny findramam-bola amin'ny alàlan'ny Banky Fampandrosoana an'i Jamaika (DBJ) handrakofana ny 70% ny vidin'ny asa fanompoana manokana sy ny Facility Fanatsarana ny trosa DBJ hahafahana miditra amin'ny $ 15 tapitrisa faratampony ho antoky ny SMTE izay tsy manana antoka ilaina hahazoana findramam-bola.
Ny Tahirim-bolan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany (TEF) sy ny banky EXIM Revolving Loan Facility ary koa ny indram-barotra jamaika nasionaly kely (JNSBL) dia mamela findramam-bola eo anelanelan'ny $ 5 tapitrisa ka hatramin'ny 25 tapitrisa dolara amin'ny zana-bola tsy mihoatra ny 5% sy eo anelanelan'ny 5 sy 7 taona hamerenana .
Fantatra fa satria manan-danja ny fidirana dia toy izany koa ny fahaiza-mandoa. Mikasika izany, ny moratorium COVID amin'izao fotoana izao amin'ny famerenam-bola dia nitarina hatramin'ny faran'ny 2020 (31 Desambra).
Ho fanampin'izany, ny SMTEs dia afaka mahazo tombony amin'ny fanampiana natolotry ny Minisiteran'ny Vola sy ny Serivisy ho an'ny daholobe eo ambanin'ny programa CARE izay manampy ny mpampiasa amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny fandaniana hafa.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahantany dia fanalahidy ary ilaina ihany koa ny fanovana dizitaly sy ny fananganana faharetana hahazoana antoka fa mivoaka avy amin'ity krizy ity ny firenena "miverina miverina tsaratsara kokoa".
Ny ivon-toerana maneran-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Jamaika dia niorina hatrany, talohan'io areti-mifindra io, tamin'ny fanolorana loharanom-pahalalana hanamafisana ny fahaizan'ny valiny lehibe sy ny vahaolana stratejika namboarina tamin'ireny fotoana ireny.
Nitaraina ny fiantraikan'ny COVID-19 manimba izahay, na izany aza, ampahatsiahivina izahay fa misy ny fahafaha-manao hampitombo ny fampiharana ireo haitao ho an'ny fahombiazana bebe kokoa. Rehefa miady amin'ny krizy isika dia tokony hikiry hitrandraka tanteraka ny fotoana mety hisehoan'izy ireo satria io no lakilen'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao izay tena ilaina mba hamerenana, hamelomana ary hamelomana ity sehatra lehibe ity.
Serivisy an-tserasera amin'ny tapakila amin'ny horonantsary, fitomboana, fizarana ary fizarana | Atom Tickets LLC, BookMyShow, Cineplex Entertainment LP
Fizarana rindrambaiko e-varotra fizarana, fizarana, fitomboana ary habe | Shopify, SAP SE, Salesforce